Himalaya Dainik » रवी लामिछानेलाई ‘समर्थन र सहानुभूति’ दिनेको ओइरो
रवी लामिछानेलाई ‘समर्थन र सहानुभूति’ दिनेको ओइरो
चर्चित अहिलेका हटकेक पत्रकार रवी लामिछानेले हालै आफ्नो २५ बर्षे बैवाहिक सम्वन्धलाई अन्त्य गर्दै डिभोर्स गरेपछि यो बिषय निकै चर्चामा छ ।
उनले आफ्नो असफल वैवाहिक सम्वन्धका बारेमा आफैंले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘दुनियाँको घर मिलाउने मैले आफ्नो घर मिलाउने प्रयासमा के के मात्रै गरिनँ होला । तर उनले हेर्दा मैले र मैले हेर्दा उनले बारम्बार आफ्नो त्यही गल्तीलाई निरन्तरता दियौं, जुन गल्तीले सारा घटनाहरु घटे ।’
रविले ईशासँग डिभोर्स गर्दा आफ्नो सबै सम्पत्ति सुम्पेको लेखेको छन् । मैले आफ्नी पूर्वपत्नीसहित आफ्ना सन्तानलाई अमेरिकाजस्तो देशमा आफू नेपाल बसेर सम्पूर्ण आफ्नो जायजेथा सुम्पेर, अझै अमेरिका बस्दाको पुरै व्यवस्थापन यतिबेलासम्म पनि गर्दै आएको छु । अदालतमा न्यायाधीशका सामुन्ने राजीखुशीले मसँग भएको र सायद भविष्यमा समेत हुन सक्ने सबै लिएर आफ्ना वकिल र उनका आफ्ना परिवारका सदस्यको रोहबरमा सम्वन्धविच्छेद गरेर अमेरिका गएकी उनलाई के अन्याय भो मैले बुझिनँ ,।
पछिल्लो समय सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम मार्फत जनताका समस्यामा साथ र सहयोग गरेपछि उनको चर्चा निकै चुलिएको हो। यही चर्चालाई माथ खुवाउन यसरी उनको पारिवारिक कुरालाई आवश्यकता भन्दा बढी उचालिएको भन्नेे आरोप लगाउदै सामाजिक सञ्जालमा उनको समर्थनमा समर्थकको ओइरो नै लागेको छ ।
उनलले फेसबुक आइडीमा राखेको उनको स्टाटसमा उनलाई समर्थन गर्दै हालसम्म २३ सय भन्दा बढि कमेन्ट आएका छन् भने फेसबुक पेजमा १२ सय बढी कमेन्ट र हजारौ लाईक आएका छन् ।
यस्ता छन् केही कमेन्ट :
राज कुमारी श्रेष्ठ लेख्छिन- “बत्ति मुनि अँध्यारो हुन्छ, तर पर- पर उज्यालो दिन्छ ।” भने जस्तै तपाईंले आफ्नो पीडालाई भुलेर संसारलाई उज्यालो र न्यानो दिनु भएको छ । तपाइँको सत्कर्मको फल मीठै पाउनु हुन्छ । आफ्नो स्थानबाट नडग्मगाउनुहोस् । जनता तपाइँको साथमा छन् । “जति धमिरा लागे पनि माटो ‘माटो’ नै रहन्छ , मर्ने त धमिरै हुन ।”
लेख कार्की लेख्छन् :
यहाँनेर खुब छोयो – “सबैको भाग्यमा माया र परिवार सुख लेखेको नहुने रहेछ । दुनियाँको घर मिलाउने मैले आफ्नो घर मिलाउन के के गरिन होला ।” – हृदयबाट लेखिएको यो वाक्य अत्यन्तै भावुकछ सर । घन त्यहीँ हानिन्छ जुन ढुंगो बलियो छ, फूल त्यही टिपिन्छ जुन सुन्दर छ , भारी उसैलाई धेरै बोकाईन्छ जुन खच्चड बलियो देखिन्छ र ईश्वरले उसैको परिक्षा लिईरहन्छ जो जति लडेपनि उठ्न हार मान्दैन ।
सबैको जीवन सोचेजस्तो हुँदैन । जीवन भनेकै नदी न हो कहिले शान्त बग्नु पर्ने, कहिले फोहोर मैला बोकेर बग्नुपर्ने, कहिले सुन्दर चिजहरु बोकेर बग्नुपर्ने । बग्नु त छँदैछ निरन्तर बगिरहनुस् । अाँफू सत्यको बाटोमा हिंडिरहेपछी असत्यहरु बिस्तारै पाखा लाग्दै छोडिदै जान्छन् । कामना छ तपाईंको आगामी यात्रा शान्त र सफल रहोस् ।
वहाँ म्याडमले पनि यो पोस्ट हेरेर कमेन्ट पढ्ने फुर्सद पाउनुभयो भने यत्ति बुझिदिनुहोला । तपाईंलाई कसैले प्रयोग गर्दैछ भने उसको पछी नलाग्नुहोला काँधमा बोकेर हिंड्नेहरुले काँध गलेपछी जस्तो फोहोर ठाउँमा लगेर नि छोडिदिन सक्छन्
जब तपाईं संगै बसेर त सन्तुष्ट हुन सक्नुभएन, अलग भैसक्नुभयो, पाउने कुरा पाईसक्नुभयो भने अब यी सब कुरा उचालेर निकालेर के जित्नुछर ? शान्त रहनुस् आफ्नो बाटो हिड्नुस । र यात्रामा छुटिसकेको पूर्व सहयात्रीलाई आफ्नोबाटोमा हिड्न दिनुस् । बरु सक्नुहुन्छ भने पूर्वसहयात्री सम्झेर शुभयात्रा भनिदिनुस् ।
त्यस्तै ज्वाल संग्रौल लेख्छिन् :
चोरले चोरलाई साथ दिन्छ, धनीले धनीलाई साथ दिन्छ, गरिबले गरिबलाई साथ दिन्छ, कप्टीले कप्टीलाई साथ दिन्छ,स्वार्थीले स्वार्थीलाई साथ दिन्छ, भ्रष्टाचारीले भ्रश्टाचारीलाई साथ दिन्छ,ठगले ठगलाई साथ दिन्छ, तर एउटा सच्चा मान्छेले मात्र सच्चा मान्छेलाई साथ दिन्छ! मेरो साथ Rabi Lamichhane लाई..! केहि झोले , ठग, ट्यापे, देशद्रोही , बलात्कारी र दुई कौडीको भरौटे जँड्याहा पत्रकारहरु फेरिपनि मगज बिग्रेको टाउको उठाउँदै छन्। हिजो देशबाट उठिबास लाउन खोज्ने अनि आज जिन्दगीबाटै उठिवास लाउन खोज्ने बिक्रिमा राखिएका हनुमानहरु हो हेक्का राख, सुनलाई जति आगोमा हालेर गलाउन खोज्छौ,उति चम्किलो हुँदै जान्छ । फाईब स्टार होटलमा सुँगुरका साँप्रा र जिन टोनिकमा मस्त हुँदै तरुनीको नाईटो चिमोटेर खित्का छोड्ने अनि रातभरी खाएको रक्सीको गन्ध बिहान पत्रिकामा पोख्ने बिकाउ पातकी पत्रकार कोहि जिउँदै छस् भने आईज कमेन्टमा बात मार्न। आज फुर्सदमा छु!
यसरी राम्रो काम गर्ने रवी लामीछानेको बदनाम गराउनेेे गरि डिभोर्सको कुरालाई उचालिएको भन्दै झनै उनलाई सहानुभूति दिने र समर्थन गर्ने समर्थकको ओईरो नै लागेको देख्न सकिन्छ ।